You searched for alahady - Page 9 sur 9 - FJKM Amparibe Famonjena
Résultats de recherche pour : alahady
Alahady 04 Aogositra 2019 Alahady 04 Aogositra 2019 Test Aogositra 2019
HETSIKA GASIGASY Alahady 23 jona 2019 Taorian’ny fanompoam-pivavahana dia niroso tamin’ny Asaramanitra ny mpianakavin’ny finoana, fanehoanan’ny Fiangonana ny maha-malagasy azy .Teo amin’ny tokontan’ny Fiangonana no nanatanterahina izany. Izany moa dia ao anatin’ny Fankalazana ny fahaleovantenam-pirenena. Niavaka ny fitafy nataon’ny isambatan’olona. Ny sampana sekoly alahady dia niavaka tamin’ny akanjo mena.Tsy ny fitafy ihany no naseo teto …
Continuer la lecture de « Hetsika »
Caneva Alahady ?? Jona 2019 – Alahadin’ny Sampana Vokovokomanga sy Hetsika gasigasy Alahadin ny sampana vokovokomanga “Fa ho lehibe eo anatrehan’ny Tompo izy ary tsy hisotro divay na toaka sady hofenoina ny Fanahy Masina hatrany an-kibon-dreniny aza.” Lioka 1 : 15 Fifaliana roa sosona no natrehan’ny Fiangonana androany satria ity no fotoana natoka fiaraha-miombom-bavaka amin’ny …
Continuer la lecture de « Caneva »
23 Jona 2019
Alahady 23 Jona 2019-Alahadin’ny Sampana Vokovokomanga sy Hetsika gasigasy Alahadin ny sampana vokovokomanga “Fa ho lehibe eo anatrehan’ny Tompo izy ary tsy hisotro divay na toaka sady hofenoina ny Fanahy Masina hatrany an-kibon-dreniny aza.” Lioka 1 : 15 Fifaliana roa sosona no natrehan’ny Fiangonana androany satria ity no fotoana natoka fiaraha-miombom-bavaka amin’ny Sampana Vokovoko Manga …
Continuer la lecture de « 23 Jona 2019 »
06 Janoary 2019 21 Aprily 2019 13 Janoary 2019 21 Aprily 2019 13 Janoary 2019 21 Aprily 2019 25 Desambra 2018 21 Aprily 2019 24 Janoary 2016 21 Aprily 2019 06 Janoary 2019 31 Martsa 2019 Précédent Suivant Teny Fanolorana « Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. » Heb 10 :24« …
Continuer la lecture de « Takelaka voalohany »
Alahady 24 janoary 2021
Alahady 17 janoary 2021
Alahady 10 janoary 2021
Alahady 03 janoary 2021
TENIN’NY FILOHA 2020